မိသားစုအပန်းဖြေခရီးစဉ်...! (အပိုင်း-၄) by uthantzin | Steem
မိသားစုအပန်းဖြေခရီးစဉ်...! (အပိုင်း-၄) by uthantzin
myanmar · @uthantzin · May2'19
[...! ( -)](https://steemit.com/myanmar/@uthantzin/aemxjk62)
ချစ်သူမြိုင် အပန်းဖြေဥယျာဉ်တွင် စိတ်တိုင်းကျလည်ပတ်ကြပြီးနောက် ဘားအံမြို့ရှိ အမျိုးအိမ်တစ်အိမ်တွင် ညအိပ်ရပ်နားခဲ့ကြပါသည်။
မနက်မိုးလင်းသောအခါ ဘားအံမြို့အတွက်လည်ပတ်ရန်ကျန်နေသေးသော ရွှေယဉ်မျှော်ဘုရားအား သွားရောက်ဖူးမျှော်ခဲ့ကြပါသည်။
ဘားအံမြို့အတွက် လည်ပတ်စရာ အထင်ကရ နေရာများစုံလင်လှပြီဖြစ်၍ မော်လမြိုင်..ကျိုက်ခမီဘုရား..စက်စဲကမ်းခြေသို့ ခရီးဆက်ခဲ့ကြပါသည်။
မော်လမြိုင်ရောက်သောအခါ မော်လမြိုင်မှ တောင်ပေါ်တန်းဘုရားများအား အဆင်သင့်သလို အပြန်တွင်ဖူးမည့်အစီအစဉ်ဖြစ်သောကြောင့် မုဒုံမြို့အနီး နာမည်ကြီးသော ဝင်းစိန်တောရဘုရားကိုသာ ဝင်ရောက်ဖူးမျှော်ကြပြီး နေ့လည်စာ ထမင်းစားရပ်နားကြပါသည်။
ထို့နောက် ခရီးဆက်လက်ထွက်ခွာခဲ့ရာ ကျိုက်ခမီဘုရားသို့ နေ့လည်နှစ်နာရီခန့်တွင် ရောက်ရှိခဲ့ကြပါသည်။ကျိုက်ခမီဘုရားတွင် ထူးခြားချက်က အထက်ပစ္စယံသို့ ယောင်္ကျားလေးများသာ တက်ရောက်ဖူးမျှော်နိုင်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။မိန်းကလေးများအတွက်လည်း အောက်ပစ္စယံသီးသန့်ထားရှိ ပေးထားပါသည်။ရာသီဥတု အရမ်းပူသော်လည်း ပင်လယ်ပြင်မှတိုက်ခတ်လာသော လေအေးလေးများကြောင့် ဘုရားဖူးသူအပေါင်း အေးမြပြီး စိတ်အေးချမ်းစွာ ဖူးမျှော်ကုသိုလ်ပြုလုပ်နိုင်ကြပါသည်။ထို့အပြင် ငါးကြီးများအား ငါးစာကျွေးခြင်းကုသိုလ်ဒါနတစ်မျိုးကိုလည်း ထပ်မံလှူဒါန်းကုသိုလ်ပြုလုပ်နိုင်ပါသေးသည်။
ထို့နောက် ကျွန်တော်တို့အဖွဲ့သည် အမှတ်တရ မွန်အင်္ကျီ..လုံချည်များ.. ငါးခြောက်များစသည်ဖြင့် ဝယ်ယူခဲ့ကြပါသည်။
ပုံမှန်အားဖြင့် ခရီးစဉ်အား ကျိုက်ခမီဘုရားတွင် ညအိပ်ရပ်နားပြီး မိုးလင်းမှသာ စက်စဲကမ်းခြေသွားမည်ဟု စီစဉ်ထားသော်လည်း ကားမောင်းသမားများမှ မိမိတို့ရန်ကုန်အပြန်ခရီးအတွက် နေခင်းဘက်အရမ်းပူသောကြောင့် ကားမမောင်းချင်ပါ၍ ကျိုက်ခမီတွင် ညမအိပ်တော့ဘဲ စက်စဲကမ်းခြေသို့ ဆက်လက်သွားရောက်ကြပြီး ညဘက်ကားမောင်းပြန်ရန် အစီအစဉ်ပြောင်းလိုက်ကြပါသည်။
စက်စဲကမ်းခြေအရောက်တွင် အချိန်ကောင်းဖြစ်နေ၍ ပင်လယ်ရေအရမ်းငံသော်လည်း ရေကမအေးဘဲ နွေးနွေးလေးဖြစ်ပြီး  ပြန်မတက်ချင်လောက်အောင် ရေဆော့/ရေစိမ်၍ကောင်းခဲ့ပါသည်။ထို့ကြောင့် ကျွန်တော်တို့အဖွဲ့သားအားလုံး အားရပါးရ ပျော်ရွှင်စွာ ရေဆော့ကစားခြင်း..အမှတ်တရဓါတ်ပုံရိုက်ခြင်းများ ပြုလုပ်ခဲ့ကြပါသည်။ကမ်းခြေဖြစ်သောကြောင့် လေတဖြူးဖြူးနဲ့ ဘီယာသောက်အရမ်းကောင်း၍ ယောင်္ကျားလေးများအားလုံး ဘီယာသောက်ကြခြင်း..ရေကစားခြင်းများဖြင့် ပျော်ရွှင်ခဲ့ကြပါသည်။
မိမိတို့အားလုံး စက်စဲကမ်းခြေတွင် ညနေ(4:00)နာရီခန့်မှစ၍ ရေဆော့ကစားခဲ့ကြပြီး ညဘက်(10:00)နာရီထိုးခါနီးအချိန်တွင် စက်စဲကမ်းခြေမှ ပြန်လည်ထွက်ခွာခဲ့ကြပါသည်။
နေအပူရှိန်ပြင်းပြင်းတွင်  လည်ပတ်နေရသောကြောင့် ကားသမားမှာ နေ့ခင်းဘက်မမောင်းနိုင်တော့ဘဲ ညအချိန်ကိုရွေးချယ်ပေးခဲ့ရခြင်း ဖြစ်ပါသည်။
ညဘက် ဖြစ်၍ မော်လမြိုင်ဘုရားများလည်းမဖူးဖြစ်တော့ဘဲ သထုံ..ရွှေစာရံဘုရားကိုပင် ညဉ့်နက်နေ၍ ကားပေါ်မှပင် ဖူးခဲ့ရပါသည်။
အပြန်လမ်းတွင် အရမ်းပင်ပန်းနေကြသဖြင့် ကားပေါ်၌အားလုံးလိုလို အိပ်ပျော်နေကြပြီး ကားမောင်းတဲ့သူနှင့် ကျွန်တော်သာလျှင် မအိပ်ဘဲ ရန်ကုန်အထိမောင်းနှင်ခဲ့ရပါတော့သည်။
ကျွန်တော်တို့ မိသားစုဆွေမျိုးများ၏ 2018--2019 ဘားအံ..မော်လမြိုင်..ကျိုက်ခမီ..စက်စဲ အပန်းဖြေခရီးစဉ်လေးသည် ပျော်ရွှင်စရာကောင်းပြီး အမှတ်တရများစွာ ဗဟုသုတများစွာနှင့် မမေ့နိုင်သောရွှေခရီးစဉ်လေးပဲ ဖြစ်ပါကြောင်း မှတ်တမ်းတင် ရေးသားမျှဝေလိုက်ရပါတော့သည်။
👍 curie, tombstone, camelot, vact, wackou, ansoe, hendrikdegrote, komoezaw, mamamyanmar, billionairehein, sawlwin, nyinyiwin, adamada, uthantzin, zinminhtet, thatkozaw, lwanwai, suhlaing, steempowergroup1, aggamun, bestofph, eric-boucher, caesarsupaimin, hotsteam, massivevibration, nannhtike, jlj, myanmarkoko, jackramsey, electrodo, yaelg, diebaasman, rival, aunggyi100, saipanpha, locikll, tensor, shortsegments, nicephoto, didic, reaverza, drmake, pinksteam, hijosdelhombre, allcapsonezero, jiujitsu, linthitsar, hein.khant, schroders, revo, bewithbreath, combatsports, whoib, warpedpoetic, oghie, liberosist, cryptononymous, eu-id, bluemoon, minhtet, varlam, khatwai, panpan24, thanlwin, and 127 others
wackou0B 41,425,646,712 0.72%
tombstone0B 119,584,175,602 0.48%
drifter10B 115,034,500 1.2%
lola-carola0B 193,609,010 1.2%
eric-boucher0B 4,336,010,960 1.2%
anwenbaumeister0B 82,322,018 2.4%
mammasitta0B 408,405,475 0.12%
liberosist0B 659,281,575 2.4%
psygambler0B 118,025,129 1.2%
lk6660B 417,397,084 1.2%
whoib0B 775,183,283 70%
curie0B 758,505,069,912 2.4%
hendrikdegrote0B 31,465,278,901 2.4%
vact0B 45,850,627,052 2.4%
dashfit0B 232,747,742 1.2%
gmedley0B 143,113,581 1.2%
camelot0B 62,551,209,669 100%
diebaasman0B 2,525,478,160 12%
moksamol0B 254,463,243 1.2%
iansart0B 508,259,101 1.2%
jiujitsu0B 1,004,012,364 1.2%
lekang0B 295,517,076 1.2%
zerotoone0B 235,161,157 1.2%
locikll0B 2,016,352,213 4.8%
aboutyourbiz0B 433,950,053 2.4%
cryptokrieg0B 408,505,422 2.4%
rival0B 2,299,993,974 2%
tensor0B 1,670,447,959 1.2%
thatkozaw0B 6,721,295,903 30%
caesarsupaimin0B 4,144,024,471 50%
flatman0B 102,005,160 2.4%
komoezaw0B 24,500,017,834 100%
allcapsonezero0B 1,098,371,155 1.2%
bluemoon0B 608,795,591 2.4%
hotsteam0B 3,585,358,852 10%
neumannsalva0B 323,508,866 1.2%
nyinyiwin0B 9,308,403,096 50%
ansoe0B 36,819,554,751 100%
mamamyanmar0B 15,695,656,189 100%
revo0B 874,129,644 1.2%
massivevibration0B 3,176,847,462 5%
eurodale0B 86,427,569 1.2%
reaverza0B 1,306,101,834 15%
clweeks0B 74,909,619 1.44%
dokter-purnama0B 129,795,382 1.2%
cryptononymous0B 648,561,110 1.2%
jlsplatts0B 94,206,714 0.36%
peaceandwar0B 345,608,900 1.2%
lwanwai0B 6,639,058,832 80%
zinminhtet0B 7,043,608,343 100%
joendegz0B 127,837,212 1.2%
myanmarkoko0B 2,948,367,063 70%
shayekh20B 114,041,907 50%
pinksteam0B 1,185,515,657 10%
nicole-st0B 76,721,842 1.2%
teukurival0B 76,022,493 1.2%
drmake0B 1,271,714,782 1.2%
skycae0B 276,063,116 2.4%
xanderslee0B 91,568,354 2.4%
kenadis0B 255,546,232 1.2%
maticpecovnik0B 323,975,035 0.96%
steemerscare0B 54,588,459 100%
thescubageek0B 115,235,991 1.2%
danaedwards0B 208,887,896 2.4%
gordon920B 119,369,742 1.2%
edjesus0B 68,208,198 100%
stahlberg0B 494,379,854 1.2%
gabrielatravels0B 126,407,956 0.6%
reizak0B 164,347,854 0.96%
zlatkamrs0B 99,340,745 2.28%
uthantzin0B 8,023,212,431 100%
hijosdelhombre0B 1,119,234,375 1.2%
suhlaing0B 5,895,177,889 50%
sawlwin0B 9,633,085,299 50%
shinedojo0B 233,276,105 2.4%
nannhtike0B 3,077,035,591 100%
bennettitalia0B 143,520,455 0.6%
billionairehein0B 13,804,057,780 55%
trixie0B 79,518,987 10%
aggamun0B 5,092,041,335 50%
steemngazun0B 243,590,071 50%
didic0B 1,359,521,938 1.2%
warpedpoetic0B 668,174,228 2.4%
steemngazun10B 98,560,453 25%
operahoser0B 143,385,889 0.36%
aunggyi1000B 2,143,532,294 50%
nwjordan0B 317,126,842 2.4%
oghie0B 661,156,163 50%
myanmarbooster0B 367,636,079 50%
steemngazun30B 243,576,316 50%
cyprianj0B 78,892,256 2.4%
ivan-g0B 278,443,371 1.2%
voteu0B 244,142,394 50%
cryptofuwealth0B 134,813,102 11%
morbyjohn0B 61,810,375 7%
scorpil0B 244,859,051 100%
ambitiouslife0B 106,043,262 1.2%
jingis070B 72,430,034 1.2%
adamada0B 8,967,260,269 25%
linthitsar0B 975,439,811 100%
shwemon0B 301,571,110 100%
wales0B 241,981,611 1.2%
samlee20180B 58,886,838 50%
steempowergroup10B 5,227,425,500 100%
hiddenblade0B 191,034,033 1.92%
misia19790B 191,491,005 1.2%
kendallron0B 226,794,962 15%
d0n3b070B 244,773,850 50%
indayclara0B 265,300,775 7.5%
goodway0B 143,827,957 1%
sergino0B 285,813,816 3%
panpan240B 541,018,635 100%
gracelbm0B 89,365,831 1.2%
frost19030B 48,198,639 50%
niouton0B 73,837,687 0.48%
saarah0B 69,396,444 20%
schroders0B 890,165,935 0.72%
zawmyintkhaing0B 540,537,869 100%
longer0B 294,713,720 50%
kafupraise0B 100,318,024 34%
scrawly0B 301,626,021 2.4%
shortsegments0B 1,639,039,224 1.2%
ilovecryptopl0B 293,646,678 1.92%
object-a0B 243,859,054 50%
yomismosoy0B 379,043,475 50%
bflanagin0B 176,735,374 1.2%
bestofph0B 4,686,773,990 15%
yestermorrow0B 181,613,163 0.72%
hansmast0B 152,226,592 1.2%
wstanley2260B 83,871,148 50%
yaelg0B 2,536,186,219 5%
clement.poiret0B 105,309,232 2.4%
ogsenti0B 65,151,173 100%
annaabi0B 129,625,761 1.2%
smartkid8090B 67,480,145 30%
trang0B 188,729,663 1.2%
rishhk0B 69,432,422 15%
antigourmet0B 61,549,015 1.2%
chickenmeat0B 100,871,302 1.2%
javier.dejuan0B 513,861,630 2.4%
reverseacid0B 163,135,874 1.2%
eu-id0B 618,097,597 10%
khatwai0B 542,150,811 100%
thanlwin0B 540,863,707 100%
hein.khant0B 914,077,986 100%
ambercookie0B 115,922,758 90%
alvin06170B 167,399,339 1.2%
solarphasing0B 357,657,668 5%
jchappe0B 50,746,864 50%
double-negative0B 515,811,052 20%
bluesniper0B 438,492,290 0.12%
herculean0B 71,015,426 50%
combatsports0B 835,837,731 2.4%
electrodo0B 2,867,483,159 0.93%
steemean0B 317,511,292 10%
lorasia0B 169,289,696 50%
bewithbreath0B 852,524,841 2.5%
jlj0B 3,035,149,661 100%
chrisluke0B 134,258,673 26%
nicephoto0B 1,559,533,435 1.92%
jackramsey0B 2,876,385,702 1.68%
epic4chris0B 70,190,867 100%
varlam0B 551,690,630 100%
moz3330B 153,235,798 1.2%
cojp0B 79,636,350 50%
@ansoe · May2'19
ကြည်နူးစရာ အပန်းဖြေခရီးလေးတစ်ခပါပဲ ခရီးမထွက်ရတာတောင်အတော်ကြာခဲ့ပါပြီ
@uthantzin · May3'19
အချိန်မအားလို့လား တစ်ခါတစ်လေတော့ အချိန်ယူပြီး ခရီးသွားအုံးပေါ့။
@billionairehein · May2'19